Mazano ekuvandudza yako webhusaiti yemidziyo nhare | ECommerce nhau
Claudi casals | | eCommerce, Kutengesa nhare
Makore a2016 na2017 aive akazara nenhau, nhare mbozha dzakapfuura makomputa pakutsvaga pawebhu. Kubva kunyika dzakasiyana, maturusi ekuongorora akawana kuti kubatana kwainge kwawedzera sei, uye kwaigona kuonekwa mumagrafu. Izvi zvakagadzira kudiwa kwekukwirisa webhu dhizaini uye kuigadzirisa kune nhare mbozha. Zvakare, kwemakore mashoma, Google yakagadzirisa algorithm yayo kuti ipe pekutanga mumainjini ayo ekutsvaga mawebhusaiti ane anodavirira dhizaini (yakawanda-chishandiso).
Mune ino chinyorwa iwe unowana makiyi uye matipi ekugadzirisa yako webhusaiti uye nekukwiridzira iyo kune nhare mbozha. Iwe unozokwanisa kusvika kune yakakura uye iri kuwedzera vateereri, uchivandudza nzvimbo yako uye yevashanyi traffic. Rangarira kuti kunyangwe iwe uchipa zvakafanana, diki skrini haigone kuchengeta zvese zvinoonekwa kubva pawebhu uye haina processor ine simba zvakadaro. Kukosha, kuwanika uye kukurumidza kuchave kuripo panguva yese iyi.
1 Nhare mbozha zvigadzirwa zvidiki
2 Kuti iyo dandemutande ine inononoka uye inomhanya mutoro
3 Maitiro evashandisi akasiyana
4 Natsiridza kuwanika uye kusangana pamwe neizvo iwe zvaunopa
5 Tarisa kuti yako webhusaiti iri mobile-inoshamwaridzika
6 Edza iyo nharembozha iwe pachako
Nhare mbozha zvigadzirwa zvidiki
Chinhu chekutanga chinofanirwa kuchinjika kubva pawebhu ndiko dhizaini yakanangana nenhare mbozha, idzo dzine zvidiki zvidiki. Makore apfuura, apo mafoni emafoni akabuda, zvaive zvakajairwa kuisa mawebhusaiti asina kuchinjika. Uye kunyangwe mushandisi, achifungidzira kuti dambudziko rakadai raivepo (nekuti raiwanzoitika), aigona kuyedza kufamba (nekushungurudzika) kana zvirimo zvainyanya kumufadza. Kwete parizvino, chinhu chekutanga chinozoitwa nemushandisi kubva pane yake nharembozha kupinda, uye kana webhu isina kugadzikana anoisiya, nekuti kune mamwe akawanda akagoneswa zvakanaka.
Kunge zvirimo, iko kushandiswa kwemabhatani. Simbisa zvakare kuoneka kwavo, uye ita kuti zvive nyore kudzvanya pavari. Kusina webhusaiti-inoshamwaridzika webhusaiti mazuva ano inopa yakajeka zvakaipa uye isina hanya chiratidzo chiratidzo.
Kuti iyo dandemutande ine inononoka uye inomhanya mutoro
Iko kurodha kumhanya kubva kune nhare hakuna kufanana nekombuta. SEO, mushandisi wekugutsikana mushandisi, kuoneka, nezvimwe zvinoenderana neizvi. Vashandisi vari kuwedzera kusashivirira, uye imhaka yekuti kana paine chero kutadza kurodha webhusaiti, yekutanga pfungwa ndeyekuti chimwe chinhu chakanganisika. Kazhinji mawebhusaiti ese anowanzo takura nekukurumidza. Uye nei kurodha kumhanya kuchikosha? Nekuti zvinoratidzwa kuti 53% yevashandisi vanobva pawebhu kana mushure memasekonzi matatu isati yati yatakura. Ngatisatombotaura nezve mawebhusaiti anotora 6 kana kunyange masekondi masere, uko kazhinji traffic yakawanda inorasika.
Kusarudza webhu dhizaini iyo yakagadzirirwa mameseji kunokutendera iwe kugadzirisa uye kugadzirisa zvemukati zvakaita semavhidhiyo kana mifananidzo Nenzira iyi, iro peji rinotakura rinokurumidza, pasina kurasikirwa nevashandisi. Imwe yemapulagi (kana iwe ukashandisa WordPress) anonyanya kushandiswa uye andinokurudzira ndiyo WPtouch Nhare Yemagetsi. Otomatiki uye zvakazvimiririra gadzira yewebhu vhezheni yakashandisirwa mafoni, pasina kubata kana kukuvadza vhezheni yako yemakomputa Dingindira rekutanga richava rakasiyana neiro raungave uine, asi mushanduro yaro yakabhadharwa, unogona kusarudza pakati pemaonero akasiyana. Saizvozvo, iri mhinduro iri nani pane kusaita kuti webhusaiti yako igadziriswe.
Zvikasadaro, iwe unogona kugara uchisarudza plugin iyo inokubatsira iwe kuvandudza iyo yekukodha nguva. Panyaya yeWordPress, tinogona kuwana mu AMP plugin. Kana iwe usina WordPress, une iyo AMP yakagadzirwa neGoogle. Kukurumidzisa kufamba kuchaitawo kuti iwe uwane chinzvimbo mune yekutsvaga injini.
Maitiro evashandisi akasiyana
Kubatanidza kubva parunhare kunoreva imwe nzira yekudyidzana, kunyangwe kubva pawebhu. Pane zvinhu zvaunofanirwa kugadzirisa kuti zviwedzere kuwanikwa kune vashanyi sekufona-kune-chiito mabhatani. Munhu kana achipinda, anofanirwa kuve nekukasira kuwana kuziva kuti zvese zviripi, uye kwete kufamba nenzira usina kuwana kana kuona chimwe chinhu chingamufadze.
Natsiridza kuwanika uye kusangana pamwe neizvo iwe zvaunopa
Mukuenderana nendima yapfuura, mushandisi anopindirana zvakasiyana nefoni yavo. Sarudzo zhinji dzaungatore kurerutsa kubva mukomputa vhezheni hadzisi dze Smartphone. Mumwe weiyo mienzaniso unouya mundangariro kupa nhamba yako yefoni. Kana mushandisi achida kufona kuti atenge, kubvunza kana chero mubvunzo, kuwaniswa kwefoni kunofanirwa kupihwa. Uye kunyangwe pakombuta, kuti foni yako inoonekwa pamusoro (yakanyanyodhindwa) yemufananidzo inogona kunge yakanaka kwazvo, zvinoshungurudza kubva kune nhare kubaya uye hapana chinoitika.
Nenzira imwecheteyo, kana iwe ukapa chaiyo kero kuti uwane bhizinesi rako, kugadzira kudonha pasi nemepu kukuwana iwe kunatsiridza ruzivo rwevashandisi. Mushure mezvose, iwe unofanirwa kufunga izvo zvinogona kutarisirwa nevanhu kubva kwauri. Kusangana nezvinotarisirwa nevashandisi vako nguva dzose iri zano rakanaka.
Nenzira imwecheteyo, chero imwe mhando yekuwana, bata, iwe unofanirwa kuitisa. Rangarira kuti zvese zvinoonekwa kubva parunhare.
Tarisa kuti yako webhusaiti iri mobile-inoshamwaridzika
Shandisa maturusi kutarisa kana webhusaiti yako yakanyatsogadziriswa kune iyo nharembozha. Google ine zvishandiso zvinowanikwa zvewebhu ongororo, uye vakatadza kuipotsa kuongorora yako mobile-inoshamwaridzika webhusaiti.
Kugadziridza. Kuuya mukati Nhare Yeshamwari Shamwari, tinogona kuona kana webhusaiti yedu ichishanda nemazvo kubva pane mbozhanhare. Kana paine zvikanganiso, pani kuruboshwe inoratidza izvo zvave zvave, kuti ugone kuzvigadzirisa zviri nyore.
Yekumhanyisa kumhanya. La Peji Yakawanikwa Insights chimwe chishandiso cheGoogle uye chakagadzirwa sezita zvarinoratidzira kutarisa kuti ine yakanaka kurodha kumhanya.
Edza iyo nharembozha iwe pachako
Zviripachena, iyi sarudzo haigone kushayikwa kuitira kuti iwe ugone kuzviongorora kana shanduko dzauri kuita dziri munzira kwayo. Usakanganwa kuti kana iwe ukaratidza dandemutande kunhengo yemhuri kana shamwari, bvunza yavo yepamoyo maonero. Enzanisa webhusaiti yako nevamwe uye ona kana urikuita zvinhu chaizvo.
Mukupedzisira, hazvisi zvakanyanya nezve zvese kuve zvakakwana uye zvakajeka, kunze kwekunge iwe uine yepamusoro-yekupedzisira webhusaiti uye unogona kushandisa yakawanda pazviri. Asi iwe pachako unozopedzisira uchiongorora kuti nekumanikidza mifananidzo, kwete kuzadza-kuzadza nemapulagi, uye nekuisa pamberi pezviri mukati, unogona kuwedzera kumhanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Mazano ekugadzirisa yako webhusaiti yemafoni nhare